Mepee Faịlụ CAB - Ihe Ntanetị Ihe Ntanetị
Mepee Faịlụ CAB
Jiri ngwa ịntanetị a na-akwụghị ụgwọ iji mepee faịlụ CAB site na ihe nchọgharị gị. Ọ dị ngwa na nchekwa, ezigaghị faịlụ gị na ịntanetị.
Okwu mmalite nke ngwa ịntanetị Onye Na-Ewepụta Archive
Ndị na-ewepụta ihe na ntanetị na ntanetị na-enye gị ohere iwepu ma chekwaa ọdịnaya nke ebe a na-edekọ ihe na ntanetị site na ihe nchọgharị gị. Ihe ndị anyị na-emepe emepe na ntanetị nwere ihe pụrụ iche: ọ dịghị mkpa ka ha nyefee ebe nchekwa gị na ihe nkesa dịpụrụ adịpụ iji wepụ ha, ihe nyocha na mmịpụta ahụ mere site na ihe nchọgharị n'onwe ya! Lelee ngalaba "Enweghị nnyefe data" n'okpuru iji mụtakwuo.
Ndị ọzọ na-ewepụta ihe ntanetị na ntanetị na-eziga ebe nchekwa gị na ihe nkesa iji wepụ ha wee budata faịlụ ndị ahụ na kọmputa gị. Nke a pụtara na iji atụnyere ndị na - emepe emepe n’akwụkwọ anyị ndị na - ewepụta ngwa ngwa na - ebu ngwa ngwa, akụnụba na - enyefe data, na - enweghị aha (nzuzo gị ga - echekwa kpamkpam ebe ọ bụ na anaghị ebufe faịlụ gị na ntanetị)
Can nwere ike wepu ọdịnaya nke ederede na-akparaghị ókè na-enweghị wụnye ngwanrọ ọ bụla, na-enweghị ịbanye, na-enweghị ịnyefe faịlụ gị. A na-akwado ndọtị faịlụ ndị a: rar, 7z, apk, zip, zipx, tar, bz2, gz, xz, ite, war, cab, bzip2, gzip, tar.bz2, tgz, tar.gz, tar.xz.
Anyị na-atụ anya na ị ga-enwe obi ụtọ na ngwá ọrụ a!